Nayakhabar.com: ‘परम्परालाई जोगाउदै आठौं पटक जिब्रो छेड्ने उनी जुजुभाइ’
‘परम्परालाई जोगाउदै आठौं पटक जिब्रो छेड्ने उनी जुजुभाइ’
मध्यपुर थिमी बोडका जुजुभाइले आठौं पटक जिब्रो छेडेका छन्। लगातार सातौ‌ंपटक जिब्रो छेडाउँदै आएका जुजुभाइ बासु श्रेष्ठले यो वर्ष पनि जिब्रो छेडाएका हुन्। मध्यपुर थिमीको बोडेमा हरेक वर्ष बैशाख २ गते धुमधामसम्म यो जात्रा मनाइन्छ।
२०६६ सालबाट हरेक वर्ष जिब्रो छेड्दै आएका श्रेष्ठले यो वर्ष पनि जिब्रो छेड्ने कोही नभएपछि आफैंले छेड्का हुन्। ‘परम्परालाई जोगाउन र बिडो थाम्न पनि जिब्रो छेड्न लागेको हुँ’, उनले जिब्रो छेड्नुअघि पत्रकारहरुलाई भनेका थिए।
फाइन आर्टमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका उनले चारपटक जिब्रो छेडाएका बुद्धकृष्णा बाघ श्रेष्ठको आफन्तको मृत्यु भएपछि जिब्रो छेडाउन थालेका हुन्।
व्यक्तिगत रुपमा इच्छाशक्ति नभए पनि जात्रालाई
निरन्तरता तथा परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउन आफू अग्रसर भएको श्रेष्ठले बताए।
हरेक वर्ष मध्यपुर थिमीको बोडेमा वैशाख २ गते धुमधामसम्म मनाइने बिस्केट जात्रालाई जिब्रो छेड्ने जात्राको रुपमा लिइन्छ। जात्रा सञ्चालन गर्न करिब एक लाखभन्दा बढीसम्म खर्च हुने गरेको छ। जिब्रो छेड्नेले आफन्त र टोलछिमेकलाई भोज गराउनु पर्ने परम्परा रहेकाले बढी खर्च लाग्ने गरेको छ।
चैत मसान्तको चार दिनअगाडि जिब्रो छेड्ने व्यक्ति, प्रधान र उपप्रधान र कर्मी नाइके बसेर जिब्रो छेड्ने व्यक्ति पक्का गरिने चलन छ। यो वर्ष जिब्रो छेडाउन प्रधानमा जलकृष्ण पिला, उपप्रधानमा माइला भासिक, सुइरो बनाउने नर्कमी समाजका नाइके धर्मलाल नर्कमी र बाजा बजाउनेमा खड्गी समाजका बुद्धकृष्ण खड्गी छन्।
त्यस्तै, चैत मसान्तदेखि निलबाराही जंगलबाट ल्याएको दाउरा एकै ठाउँमा थुपारिन्छ। बेलुका साढे १० बजे पूजा गरी ध्वनी जगाउने काम गरिन्छ। ध्वनीको फूल, अक्षता, प्रसाद जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई धैर्यधारण गर्न शक्ति प्रदान हुने विश्वासले दिइन्छ। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई सहनसक्ने क्षमता पाओस भन्ने विश्वासले दिइने गरिएको छ।
त्यही बेलुकादेखि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले जिब्रो छेडेर विधि पूरा नगरुन्जेलसम्म निराधर बस्नुपर्ने परम्परा छ। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले तीन दिनसम्म केही खान नहुने, पशुपन्छी र महिला मान्छेसँग छुन नहुने परम्परा छ भने छोएमा जिब्रो छेड्दा दुख्ने, रगत आउने र बिघ्नबाधा आउने जन विश्वाश समेत रहेको पाइन्छ।
कसले कतिपटक जिब्रो छेडाए?
एकै व्यक्तिले कति पटकसम्म जिब्रो छेडाउन सक्ला? पाँच, दस, बीस, तीस वा त्योभन्दा बढी। एकै व्यक्तिले ३२ पटकसम्म जिब्रो छेडाएका थिए। प्राचीनकालेदखि चल्दै आएको साहसिक तथा धार्मिक कार्यमा हायबाजेले अहिलेसम्म कै सबै भन्दाबढी पटक जिब्रो छेडाएका हुन्।
स्थानीय बुढापाकाका अनुसार त्यसपछि २२ औं, १२ औं र आठौं पटक जिब्रो छेडाएर विभिन्न व्यक्तिले इतिहास रचेका छन्। अहिलेसम्म दोस्रो धेरैपटक जिब्रो छेडाउनेमा हर्खनरसिंह बास श्रेष्ठ परेका छन्। उनले २२ औं पटक जिब्रो छेडाएका थिए। जिब्रो छेडाएका जीवितमध्ये कृष्णचन्द्र बाघ श्रेष्ठले १२ औ, चन्द्रसेन द्यो र दिलकुमार खंपेले सातौ पटक, बृद्धकुष्ण बाघ श्रेष्ठले चारपटक छेडाइसकेका छन्।